Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino
(natao hitantarana ny ireo zava-nitranga sy niainana teto amin’ny Fiangonana Mb Anne Anjomakely hatramin’izay niandohany ka hatramin’izao. Karazana “Boky volamena” manaraka ny teknika moderina izy ity. Isika rehetra izay manan-ko lazaina dia afaka mandefa izany aty amin’ny tompon’andraikitra amin’ny Serasera “mass media” amin’ny alalan’ny adresy mailaka ….. Dia misaotra anao mandefa ny sarinao sy ny tahirin-tsary izay misy any aminareo handraiketantsika ny tanataran’ny Fiangonantsika.)
Atoa RAKOTOARIVONY Patrice no mitantara
TANTARAN’NY FIANGONANA EO AMBANY FIAROVAN’I MB ANNE (EKAR ANJOMAKELY)
Nanomboka nivavaka tamin’ity Fiangonana ity aho tamin’ny taona 1960
Ny filoha tamin’izany dia Atoa RAFARILARABO Antoine
Ny mpampianatra dia Atoa RANAIVO Marc
Tamin’ny taona 1964 dia nanoro hevitra azy aho mba hangataka fanampiana ho an’ny sekoly tao amin’ny Ambasady Amerikana. Tamin’izay fotoana izay dia nahazo fitaovana toy :
ny latabatra, banc, estrade, tableau…
Ny taona 1969 dia tonga nanao fitsidihana pastoraly tao amin’ny Distrika Ambohijanaka ny Kardinaly Jérôme RAKOTOMALALA, tamin’izany no nanararaotana ny fotoana fandalovany nangatahana àlalana avy aminy ny mba samy hitantana ny volam-piangonana ny tsirairay satria nalefa tamin’ny distrika avokoa ny “Dénier de Culte” ka ny Mompera Curé no nandoa ny karaman’ny mpampianatra niasa teo amin’ny Distrika.
Nambaran’ny mpangataka fa ny anjara volan’ny distrika sy ny diosezy dia omena azy miaraka amin’ny vary fandoa isan-taona.
Ny antony dia misy ny Fiangonana tsy mahavita ny adidiny, hany ka tsy mandray karama ny mpampianatra ary niara-voasazy avokoa na dia ny mpampianatra nahavita ny adidiny aza.
Ny valiny azony tamin’izany anefa dia hoe: “MIALA RANGAHY, fa efa antitra , omeo ny tanora ny fitondrana.” Nalahelo izy nandre io tenin’ny Kardinaly io ary nilaza taminy fa tsy nety ny valinteny natao azy. Mbola nilaza ihany anefa ny Kardinaly fa hakatony io Fiangonana io raha mikiry ny hijanona izy. Tamin’izay anefa no namaliany azy hoe :”Fiangonan-drazanay io ka tsy maintsy mivavaka ao izahay na tsy omenao Pretra aza.”
Nakatony nandritry ny 3 taona tokoa ny Fiangonana (1969-1971). Tsy nahakivy ny Kristianina anefa izany fa tonga nivavaka ihany izy ireo.
Nony tonga ny fotoana niantsoan’Andriamanitra azy dia Atoa RAKOTO Jules indray no voafiidin’ny Kristianina hitondra ny Fiangonana. Fotoana lavalava ihany no nitondrany ny Fiangonana tamin’izay fotoana izay.
Ny taona 1972, natsangana ny fikambanan’ny Tanora izay nitondra ny anarana hoe:”Tanora Kristianina Katolika” (TaKriKa). Natsangana ara-panjakana izy io tamin’izany ka nisy ny fitsipi-pitondrana sy ny ftsipika anaty nahazoana “recepissé”
Ny asa voalohany: natao tamin’izany dia nampiditra herinaratra na “Electricité” , ny orinasa SEM no nampiditra ny jiro.
Nampidirina ny jiro mba nahafahana nandefa sarimihetsika izay nitadiavam-bola hanefana ny karaman’mpampianatra sy ny fitaovana ilain’ny Fiangonana.
Tapitra ny fitondran’Atoa RAKOTO Jules ka Atoa RASON Antoine no voafidin’ny Kristianina hitantanan indr ay ny Fiangonana nandritra ny 3 taona.
Ny asa faharoa : nataon’ny TAKRIKA dia nanagana sekoly Mb Anne
Ny asa fahatelo: fanaovana io Otely vato io.
Ny fandalinana ny FINOANA ihany koa dia tsy natao ambanin-javatra:
nasiana mpampianatra ny sakramenta isan-tsokajiny , natao koa ny fitaizan-tena ara-panatanjahan-tena.
Nampisaotra an’Andriamanitra fa tafaverina soamatsara teo amin’ny distrikan’Ambohijanaka ny fiangonana ka i Reverend Pere curé Barthelemy no voatendry ho “Curé” vaovao.
Marihina fa nisy 70 fitopolo mahery no isan’ny olona nandray ny sakramenta ny batemy tamin’ny fetin-piangonana volana Aogositra 1972.Taorian’io dia nitohy ny fandraisana ny sakramenta rehetra.
Ny taona 1978 dia nofidin’ny Kristianina ny tenako (rakotoarivony Patrice) hitondra ny fiangonana rehefa tapitra ny fiitondran’ Atoa RASON Antoine.
Tamin’izany indrindra no nanaovana ny asa lehibe dia ny”FANKALAZANA NY FAHA100 TAONA NY FIANGONANA”, Telo taona no nanomanana an’io fotoan-dehibe io tamin’izany. Ny nitondra ny distrikan’Ambohijanaka tamin’izany ny Pere curé RAZAKARIVONY Raymond.
Ny fanatsarana ny fiangonana no natao:
Novaina fanitso ny tafo,nolalorina sy nolokoina ny atiny sy ivelany, nosoloina ny seza fipetrahana tao anatiny, nohatsaraina ny tilikambo izay nametrahana ny sarin’ny Mb Anne.
Natao nizaka tena ny sekoly Mb Anne ka nomena ny mpampianatra ny fitantanana ny sekoly tamin’ny lafiny rehetra hatramin’ny fitantanana ny vola, nandroso ny fampianarana , betsaka ny mpianatra no afa-panadinana. Nitombo hatrany ny isan’ny mpianatra, nahazo vola ny sekoly.
Tamin’izany ny fiangonana dia tsy nanampy ny sekoly intsony afa-tsy tamin’ny asa vaventy (ohatra: fanoloana ny tafo).Marihina fa izy ireo ihany no manao ny asa fanitarana ny “salle de classe”.
Tapitra teo indray ny fitondrana ka Rtoa RAVONINARIVO Marthe no nitondra ny fiangonana. Maro ihany koa ny zava-bitany tamin’izany, ireo vavolombelona dia afaka mameno ny tantara. Ary rehefa tapitra ny fitondran-Rtoa RAVONINARIVO Marthe dia nodimbiasan’dRtoa RANDRETSA MADELEINE ,Izay voafidin’ny kritianina hitondra indray ny fiangonana.
Tamin’izany no nanaovany ny asa goavana dia ny fametahana volizy ny manodidina ny rindrina anatiny.
Nankalazaina tamin’izany ihany ny faha-110 Taona ny fiangonana.
Rehefa nifarana ny fitondran’ny Rtoa RANDRETSA dia Atoa RAJAONARISON Denis voafidin’ny kristianina no namdimby azy hitondra ny fiangonana.
Anisan’ny asa nataony tamin’izany ny fananganana tsangam-bato izay nanoratany ny anaran’ireo Ray aman-dReny be nanorina ny fiangonana Mb Anne.
Rehefa nifarana ny fitondran’ny RAJAONARISON Denis dia Atoa RANDRIANARISOA J.DE LA CROIX no voafidinn’ ny kristianina hitondra ny fiangonana mandritra ny telo taona. Betsaka ireo zava-bitany tamin’izany, indrindra teo anivon’ ny sekoly sy ny fikambanana masina ary ny fitomboan’ireo izay nandray ny sakramenta.
Rehefa tapitra ny fitondran’i Atoa RANDRIANARISOA J. Dia RAJHOSON Edouard no nofidin’ny kristianina hitantana ny fiangonana mandritra ny taona:
Ny fampandrosoana ny sekoly no tena nimasoany.
Nankazainy tamin’izany ihany koa ny faha120 Taona ny fiangonana .
Rehefa tapitra ny fitondran’i Atoa RAJHOSON dia Rtoa RANDRIANASOLOARIJAONA CHARLINE no nofidin’ny kristianina hitondra ny fiangonana. Maro ireo asa vitany tamin’izany ka anisan’izany ny asa fanitarana ny fiangonana izay nikelezany aina mihitsy nandritra ny 6 taona nitondrany ( Marihina fa mandat 2 no nitondrany),tao ny fanoloana ireo:
tafo izay efa harafesina sy loadoaka, fametahana “carreaux” teo amin’ny Otely masina, ny fanatsarana ny zava-maneno, niroborobo ny fikambanana chorale …
Nankalaza ny faha130 Taona ihany koa ny fiangonana tamin’izany.
N.B: eto am-pamaranana dia tsara ny manamarika fa araka ny fahafantarako azy sy ny hita ny maso ary niainako teo anivin’ny fiangonana no nanoratana ity tantara ity koa ialako tsiny amin’izay mety tsy voatanisako sy izay tsy voalazako araka ny tokony ho izy.
Atoa RAKOTOARIVONY Patrice
(Nangonin’ny P. Curé 02/03/2014)
Ireto avy ny Pretra nifandimby taorian’I Mompera PEYRILHE